Umqeqeshi omusha uyazi uMzansi ufunani | News24
Umqeqeshi omusha uyazi uMzansi ufunani
UMQEQESHI omusha noma osabambile kwi-Banyana Banyana uDesiree Ellis uthi kulukhuni ukufeza izidingo zesizwe kodwa yena uzimisele.
Lentokazi eyayingalibheki ipali ngezikhathi zayo eqenjini lesizwe losisi abadala ithi uMzansi mkhulu kakhulu kanti futhi ibhola liyathandwa yisizwe sonke futhi kuke kube lukhuni ukuthokozisa wonke umuntu kodwa yena uthi wazi kahle into edingwa yilelizwe.
Uthi mhlawumbe uma ethi uzozama angeke kuzwakale kahle kungcono athi uzokwenza okulindekele kuyena noma-ke uzokwenza okufunwa uMzansi.
“Angeke ngiqambe amanga ngithi ukuqeqesha iqembu lesizwe elifana neBanyana Banyana kulula. Kuzoba nzima kodwa into engisizayo ukuthi nami ngayidlalela iBanyana Banyana isikhathi eside ngaze ngaba uKaputeni. Nginenhlanhla ngoba ngiyazazi izinto ezifunekayo ukuze usondelane nempumelelo, futhi ngingokowokuzalwa eMzansi, ngiyazi ukuthi lelizwe lidingani. Mina ngingasho nje ukuthi ngizozama ngayo yonke indlela ukwenza okufunwa abantu baseMzansi ngoba abadlali bethu ngibazi njengoba ngizazi,”kusho uEllis.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uEllis uqagule abadlali abazodlala umdlalo wobungani namaGibhithe (Egypt) ngomhlaka 22 kuMfumfu njengamalungiselo e-Women Africa Cup of Nations Championships eyobe iseCameroon kusukela ngo 19 kuLwezi kuya kumhlaka 3 kuZibandlela.
Phela u-Ellis uthathe lesikhundla sokuqeqesha iBanyana Banyana emva kokushiya kuka Vera Pauw kungalindele muntu. Lomqeqeshi uzosizwa uMaude Khumalo kanti uSheryl Botes uzobasiza njengosomaqhinga.
I-Women Africa Cup of Nations izodlalelwa eCameroon enhlokodolobha yakhona e-Yaounde nase Limbe.